Sunday September 08, 2019 - 07:50:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Abaal marinta waxaa Xawaaladda Taaj guddoonsiiyey hey’adda ACCPA oo ah mid ka mid ah sadexda hey’adood ee ugu weyn dunida ee ka shaqeeya hubinta hufnaanta Maaliyadda.
Maamulaha Xawaalada Taaj Cali Maxamuud Guuleed ayaa sharraxay sida abaalmarintaan ay ku heleen "Waxaan abaalmarintaan uga guuleysanay waddamo naga hormarsan, waxaana ku gaarnay dadaallada & garab istaagga Bangiga dhexe ee habka xawaaladuhu u shaqeeyaan” ayuu yiri Cali Maxamuud Guuleed (Cali Mahad).
Guddoomiyaha Shirkadda isgaarsiinta ee hormuud Axmed Maxamuud yuusuf oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in abaalmarintan ay usoo galeen dadaal wayn sidii ay u noqon lahaayeen xawaalada ugu fiican qaarada Afrika ayaa yiri "Meel hoose ayay ka soo bilaabeen waxayna marayaan heer ay ku guuleysteen xawaaladda ugu fiican qaaradda Afrika, Taaj hadii ay fiican tahay waxaa weeye Hormuud baa fiican waa hooyada Taaj iyo shirkaddo kale” ayuu yiri Axmed Maxamuud Yuusuf.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa hambalyo iyo bogaadin uu ujeediyey Maamulka xawaalada Taaj kadib waxa uu tilmaamay in guusha ay gaareen ay astaan u tahay halka ay Soomaaliya ka taagan tahay Hufnaanta Maaliyadda ”In nala aaminay waxaa astaan u ah guusha maanta ay gaartay xawaaladda Taaj, Xawaalada iyo bangigaba lama ilaawi karo waxaana ka shaqaynaynaa inaan u fududeyno wax walba oo ay u baahan yihiin” Ayuu yiri wasiir beyle.
Shirkadda Ethiopian Airline oo ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa.
Dowladda Federaalka oo dib ufasaxday duulimaadyada caalamiga ah.
Sacuudiga oo hakiyay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa sababa laxiriira Carona Virus.
Ciidamada Dowladda Kenya oo Burburiyay Xaruntii Shirkadda Hormuud ee deegaanka Jaldeys.